तुलसीपुर उपमहानगरको विकट वडामा एम्बुलेन्स « Farakkon
तुलसीपुर उपमहानगरको विकट वडामा एम्बुलेन्स
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विकट वडालाई लक्षित गरेर एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । उपमहानगरपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरुमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने योजनामा रहेको उपमहानगरपालिकाले पहिलो चरणमा तीनवटा वडामा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
वडा नम्वर १, १३ र १९ मा सञ्चालनमा ल्याइने उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. गोकर्ण दाहालले जानकारी दिए । उनले उपमहानगरपालिकाका आठवटा स्वास्थ्य चौकीहरुमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनका लागि पहल भइरहेको समेत बताए ।
विकट वडाहरु ४, ७, ११, १५, १७ मा पनि एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि पहल भइरहेको डा. दाहालले बताए । उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका एम्बुलेन्सहरुमा सुत्केरी महिला र ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य महाशाखाका उपसंयोजक बसन्त आचार्यले बताए ।
एम्बुलेन्सहरुको सञ्चालन वडामा रहेको स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिले गर्ने पनि उपसंयोजक आचार्यले बताए । यसैबीच मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले वडा नम्वर १ का वडा अध्यक्ष लक्ष्मण भण्डारीलाई एम्बुलेन्सको साँचो हस्तान्तरण गरेका हुन् ।